Umchwephesha weChemicals Umakhi weBhloko
Yintoni i-Afatinib? Xa sifuna i-Afatinib? Isebenza njani i-Afatinib? Ngaba i-Afatinib yamkelwe yi-FDA? Ngokuqinisekileyo Buphi ubungozi / iziphumo ebezingalindelekanga eziziswa yi-Afatinib? Luluphi Olunye Uphando Nge-Afatinib? Yintoni i-Afatinib? I-Afatinib (i-CAS: 439081-18-2) sisiyobisi ekujoliswe kuso esaziwa njengeGiotrif. Isetyenziselwa ukunyanga umhlaza wemiphunga ongekho mncinci (NSCLC) […]
Yintoni iRegorafenib? Kutheni le nto iRegorafenib yamkelwe yi-FDA? Isebenza njani iRegorafenib? Isebenza ngantoni iRegorafenib Main? Zeziphi izibonelelo zeRegorafenib ezibonisiweyo kwiZifundo? Zeziphi iingozi / iziphumo ebezingalindelekanga ezinokuthi ziziswe nguRegorafenib? Ndigcina njani kunye / okanye ndilahle ngaphandle iRegorafenib? Imikhombandlela yexesha elizayo yesiphelo seRegorafenib Yintoni iRegorafenib? IReorafenib (i-CAS: 755037-03-7), […]
Gefitinib Overview Gefitinib Mechanism of action Gefitinib Use In the Side Side Effects of Gefitinib Gefitinib Storage More Rearch: "Lung Cancer Killer" Gefitinib Gefitinib Overview Gefitinib is kinase inhibitor. Igama leekhemikhali elithi gefitinib ngu-4-Quinazolinamine N- (3) I-4-fluorophenyl) -7-methoxy-6- [3- (4-morpholinyl) propoxy]. IGefitinib ine-molecular formula C22H24ClFN4O3, ubunzima beemolekyuli ze-446.9 daltons kwaye ngumgubo omhlophe. […]
Iziyobisi ekujoliswe kuzo Ibrutinib (CAS: 936563-96-1) Ibrutinib Mechanism of Action Oko i-Ibrutinib isetyenziselwa iIbrutinib Izibonelelo / Iziphumo Iziphumo ekufuneka sizithathile Ibrutinib Ibrutinib Iziphumo ebezingalindelekanga I-lymphoma ijoliswe kumachiza. Iziyobisi ekujoliswe kuzo zijolise ekubulaleni uhlobo lweseli oluye lwajika lwaba ngumhlaza okanye ukumisa imiqondiso eyenza ukuba iiseli ezinomhlaza zikhule okanye […]
I-Nootropic Coluracetam: Ungasebenza njani kuBongo kunye nokunyanga unxunguphalo
I-Racetam Usapho lweNootropic- Coluracetam Coluracetam (BCI-540, okanye iMKC-231) yi-nootropic enyibilikayo enamafutha kudidi lwe-racetam yeekhompawundi. IColuracetam inamandla ngakumbi kune-racetam yoqobo, iPiracetam. IColuracetam yayinelungelo elilodwa lomenzi wayo nguMitsubishi Tanabe Pharma waseJapan ngo-2005. Iyenza enye yezona nootropics zintsha zisekwe kwi-racetam. Ilungelo elilodwa lomenzi weColuracetam kamva lathengiswa kwiBrainCells, […]